Semalt: Ahoana no hanakanana ny tranonkala iray miseho any amin'ny Google Search Results
Ny traikefa an-tserasera amin'ny aterineto dia matetika feno rohy spam. Ohatra, ny ray aman-dreny dia mety te hanakana ny votoatin'ny olon-dehibe amin'ny toe-javatra misy ny ankizy mahazo aterineto. Amin'ny tranga hafa dia mety hanala ny valiny mahasosotra avy amin'ny valin'ny fikarohana ianao. Amin'ny tranga maro, mety mila mianatra ny fomba hanakanana tranonkala sasany ianao amin'ny fampisehoana ny pejy Google Search Resultanao.
Michael Brown, manam-pahaizana matihanina Semalt , no manamarina fa azo atao ny manakana ireo toerana ireo amin'ny mari-pamantarana Google. Taorian'ny fanavaozam-baovao sasany, nampidirin'i Google ity sehatra ity mba hanamaivanana ny fahasosoranao. Azonao atao ny afaka manasitrana pejy efa voamarina amin'ny pejy valin'ny fikarohana anao.
Mba hankafizana io endri-javatra io dia mila mamorona kaonty Google ianao. Amin'ny fanombanana ny kaonty dia mandehana any amin'ny tranokala izay tsy tokony hialana amin'ny fijerena ianao. Amin'ny voalohany, mety tsy hitanao ny safidy sivana ao amin'ny pejinao fikarohana Google. Izany dia satria i Google dia tsy maniry ny ho toy ny mpisera voalohany. Google dia te hanana traikefa tsara kokoa, ary izany no antony nisafidianany hanafina io safidy io. Ankoatra izany, afaka miverina any amin'ny lisitra miafina ao amin'ny kaonty Google ny olona.
Mandehana any amin'ny sehatry ny tranonkala mila atsahatra amin'ny valin'ny fikarohana. Avy amin'ity endri-tsavon'ny menasao ity, afaka miditra ao amin'ny Google ianao ary misoroka ny sehatra iray manontolo amin'ny fisehoana eo amin'ny mpisera Search Search..Amin'ny tranga hafa dia mety mila manakatona tranokala iray manontolo. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny mampihatra ny tranokala 'block all example.com'. Azonao atao ihany koa ny afaka mivezivezy mankany amin'ny valin'ny fanakanana hijery ireo tranonkala ireo. Avy eto, manana safidy hifehezana na hitantana ireo tranonkala voasakana ianao.
Mandehana mankany amin'ity menio ity, midira ao amin'ny kaontinao Google ary hikaroka ny fangatahanao. Mandehana any amin'ny "fitantanana tranokala voasakana" amin'ny alàlan'ny fikarohana. Avy eto, afaka mandeha amin'ny sehatra ianao ary mitantana ireo tranokala voasakana. Afaka manokatra tranokala iray ianao avy eo
Ny mpampiasa sasany dia mety hampiasa ny fampitomboana ny tranokala mba hifehy ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala . Amin'ireny tranga ireny, ny olona dia mampiasa fomba fijery toy ny fanitarana BlockSite mba hifehy ny fihetsika. Ankoatra izany, afaka manangana tenimiafina koa ny olona iray mba hifehezana ny fomba ampiasan'ny navigateur. Izany dia afaka misoroka ny olona amin'ny fananganana sehatra hafa amin'ny browser.
Amin'ny tranga sasany dia ilaina ny manakana ny valin'ny fikarohana sasany amin'ny fanehoana ny fampisehoana ao amin'ny pejin'ny fikarohana Google. Ireo valim-pikarohana ireo dia tonga ary mahatonga ny traikefa amin'ny tranonkala manontolo ho marefo, indrindra raha mampiasa teny fanalahidy iray ihany ianao mba hifehy ny valin'ny fikarohana. Amin'ny toe-javatra hafa, mila ampidirin'ny olona ao amin'ny tranonkalan'ny ordinatera ny fifehezan'ny ray aman-dreny. Ity lahatsoratra SEO ity dia afaka mampianatra anao ny fomba hanakanana vohikala amin'ny valin'ny fikarohana Google. Azonao atao ny manakana ny valin'ny fikarohanam-pihetseham-po izay tsy mitsaha-mamerina intsony amin'ny teny fanalahidy samihafa izay ahitana indrindra amin'ny fikarohanao. Azonao atao ihany koa ny manangana tranokala ho an'ireo tranonkala izay tsy tianao ao amin'ny Console search Google Source .